Kedu ihe bụ 3DCart na gịnị kpatara ị ga-eji ya na Ecommerce gị? | ECommerce ozi ọma
3DCart bụ sọftụwia ụgbọ ibu azụmahịa, emere maka Ecommerce nke ogo na ngalaba ọ bụla. Ọ bụ ikpo okwu e-commerce dị ike nke na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị n'ụzọ dị mfe ma nweta nsonaazụ achọrọ, n'ihi usoro ngwaọrụ na atụmatụ gụnyere, dịka ọmụmaatụ, njikwa iwu na ahịa.
1 Kedu ihe 3DCart na-enye?
2 3DCart Atụmatụ
Kedu ihe 3DCart na-enye?
Maka ndị na-ebido ebido, ọ na-enye gị usoro ịrụ ọrụ nke ọma ma dị ike iji zụọ ma na-ere ihe ọ bụla na ntanetị ma nye ndị ahịa gị ụzọ dị mfe ma dịkwa mma iji nye ngwaahịa na ntanetị.
Ọbụghị naanị nke ahụ, ọ na - enyekwa gị ohere ijikwa ihe niile e-commerce software site na iji interface nchịkwa echedoro, yabụ ị nwere ike ịnweta sistemụ ahụ, lelee data ndị ahịa, ndekọ ahịa, tinyekwara akwụkwọ ọnụahịa na kọmputa ọ bụla jikọtara na Internetntanetị.
Ọ na - enye gị ohere ịhọrọ site na ọtụtụ ụdị ndebiri eji arụ ọrụ nke ọma na nke ị nwere nkwado teknụzụ ịza ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nsogbu na saịtị Ecommerce gị.
Dịka anyị kwurula, enwere ọtụtụ atụmatụ nke 3DCart na-enye ma na-aba oke uru maka azụmaahịa Ecommerce. Ọmụmaatụ:
Enyele backorder na nchere ndepụta ndepụta
Njikwa ngwongwo, gụnyere ogbe edezi na ọkwa mgbasa ozi dị ala
Nkwado maka ire nke ngwaahịa dijitalụ
Nhọrọ ngwaahịa, gụnyere nchịkọta
Otutu ngwa oru SEO
Nkwado maka ndepụta ego, Kupọns, ego, ndepụta aha
Nnukwu mbubata na mbupụ
Akwụkwọ ọnụahịa na nsuso nsuso
Onye na-ahu maka ugwo na ugwo onu ahia
Ikwusi kwuo ya 3DCart dị na nchịkọta ise dị iche iche a ga-akwụkwa ya ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ. Ozi ọma ahụ bụ na ịnwere ike ịnwale sọftụwia ahụ n'efu maka ụbọchị 15 na-enweghị kaadị kredit yana yana nkwado teknụzụ n'efu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe bụ 3DCart na gịnị kpatara ị ga-eji ya na Ecommerce gị?